မိဘအစား ဖန်ဆင်းထားသူများ - Yangon Media Group
လောကတွင် မိခင်၊ ဖခင်သည် ဆပ်မကုန်သော ကျေးဇူးတရားတို့ဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိနေကြသည်။ အမိနှင့် အဖတို့မရှိပါက မည်သူသည်အမိ၊ မည်သူသည် အဖဟု လောကက သတ်မှတ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အမိအဖတို့အစား အစ်ကိုအစ်မတို့က မိမိဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး ပြုစုထိန်းသိမ်းခဲ့၍သာ အစ်ကိုကြီး အဖအရာ အစ်မကြီး အမိအရာဟူသော စကားတစ်ရပ်ဖြစ်တည်လာခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ အစ်ကိုသည် အဖဖြစ်လာ၍ အစ်မသည် အမိဖြစ်လာလေသည်။ မိခင်မှ မွေးဖွားလာသော ဦးဆုံးသော သား(သို့)သမီးများသည် မိမိထက် နောက်ကျစွာ မွေးဖွားလာသော ညီ၊ မောင် အစရှိသည်တို့အား ငယ်စဉ်မှစတင်ကာ ချစ်ကြသည်မှာ သဘာဝတစ်ခုလိုပင် ဖြစ်နေပေပြီ။ အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးများသည် သူတို့အတွက်ထက် ညီငယ်ညီမငယ်တို့၏ ဘဝအဆင် ပြေစေဖို့ အစစအရာရာ ညှာတာအလိုလိုက်အလျှော့ ပေးကာ ချစ်တတ်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းသည် ကြားဖူးရုံမျှမဟုတ်။ လက် တွေ့ကြုံတွေ့ဖူးခံစားဖူး၍ တိကျစွာပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူသည် မွေးချင်းများအားလုံးတွင် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်ပါသည်။ အကြီးဆုံးတို့၏ သဘာဝအတိုင်း ညီ၊ ညီမများ ကျောင်းအပ်ရာတွင် မိဘများကိုယ်စားကျောင်းအပ်ပေးခဲ့ရသလို ညီ၊ ညီမများ အဆင် ပြေမှု၊ မပြေမှုများကိုလည်း အားလုံးတာဝန်ယူရပြန်သည်။ သူတို့အဆင်ပြေလျှင် ပီတိဖြစ်ရသလို အဆင်မ ပြေလျှင် သက်ပြင်းကြိမ်ဖန်များစွာချ၍ ဝမ်းနည်းခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်မှာ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ စောစီးစွာ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသော်လည်း ညီ၊ ညီမများမှာ စာမေးပွဲအောင်လျှင် အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိသလိုဆုအဖြစ် တောင်းဆိုသည်များကိုလည်း မည်မျှပင် ခက်ခဲစေကာမူ ရအောင်ရှာကြံပေးခဲ့မိသည်။ သူတို့၏ မျက်နှာမညှိုးအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးနေချင်သော စိတ်သည်အခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ စာရေးသူကဲ့သို့ပင် ကျန်သော အစ်ကို၊ အစ်မများအားလုံးသည် ထိုကဲ့သို့သော ဖခင်စိတ်စေတနာများရှိမည်မှာ မလွဲပေ။
ထို့ကြောင့် အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးများသည် အချို့ သော မိသားစုများ၏ ဖခင်စိတ်မရှိ ဖခင်များမေတ္တာထက် သာပေသည်။ ငါ့ညီ(သို့)ငါ့မောင်တို့ အများအလယ်၌ မျက်နှာငယ်နေလေမလား၊ အဆင်ပြေပြေ ချောချောမောမောမှ ဖြစ်ပါမည်လားဟု စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ရှိနေမည်ဟု တွေးမိသည်နှင့် ဖခင်စိတ် မိခင်စိတ်များ ဝင်လာပေပြီ။ ထိုစိတ်ဝင်လာသည်နှင့် အစ်ကိုသည် အစ်ကိုမဟုတ်တော့ မြင့်မြတ်သော ဖခင်ဖြစ်လာပြီး အစ်မသည် အစ်မမဟုတ်တော့ဘဲ မိခင်ဖြစ်လာပေပြီ။ သူတို့၏ မြင့်မြတ် သောစိတ်ဓာတ်က အမြင့်မြတ်ဆုံး မိဘနှစ်ဦးနေရာသို့ ရောက်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မိမိမှ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သောသူများက မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ ခွန်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းများကြုံသည့်အခါ မချိအောင် တနုံ့နုံ့ခံစားရသည်မှာလည်း အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီးများပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမျိုး၌ တစ်ယောက်တည်းကြိတ်မှိတ်ကာ ငိုကြွေးရုံမျှတစ်ပါး အားပေးဖြေသိမ့်မည့်သူမရှိပေ။ ချောင်ကွယ်၌ အသံတိတ်ထိုင်ငိုရရင်းဖြင့် မေတ္တာမပျက်ဘဲ ချစ်မပြယ် တတ်သည်မှာလည်း အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီးများသာ ဖြစ်သည်။ လောကတွင်ရှိသော စကားပုံများသည် အစ်ကိုအစ်မကြီးများ၏ မေတ္တာဖြင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရသည်မှာလည်း အထင်အရှားပင်။ ”သူ့ထက်သာ မနာလိုဟူသောစကားသည် ယေဘုယျအနေဖြင့် မှန်သော်လည်း မိဘနှင့်သားသမီးနှစ်ဦးအတွက် မှားနိုင်သလို အစ်ကိုကြီးအစ်မကြီးတွေနှင့် ညီ၊ ညီမတွေကြား ဆက်နွှယ်မှုတွင်လည်း မမှန်နိုင်တော့ပေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးများသည် သူတို့၏ဘဝပျက်ရသည်အထိ ညီ၊ ညီမများအတွက် ပေးဆပ်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ ညီ၊ ညီမများအတွက် ပေးဆပ်ရင်းဖြင့် အနာဂတ်ဟူသည်လည်း သူတို့မမြင်၊ နစ်နာသည်ဟူ၍လည်းမတွေးပေ။ လောကတွင် အသိဥာဏ်မရှိသူသည်သာ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးသူဟု လူများပြောဆိုတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးများသည် အသိဥာဏ်မဲ့သူလောဟု တွေးထင်နိုင်သည်။ သို့သော် အချို့အရာများသည် ပေးဆပ်သူသာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တတ်ကြပါသေးသည်။ ထိုရာထူးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသူများထဲတွင် အစ်ကိုအစ်မများသည် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုရှိသော နှလုံးသားနှင့်မို့ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဖြေမဆည်အောင် ဖြစ်ရသည်များလည်း ကြုံတွေ့ရဖူးပေပြီ။
ကိုယ်တွေ့တစ်ခုတင်ပြပါမည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်တက်ရန် မေဂျာစောင့်ဆိုင်းနေသော ညီမဖြစ်သူသည် ပိုးထိကာသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ လယ် တော၌ပဲတီကောက်ရင်းဖြစ်သည်မို့ ဆေးခန်းသို့သွားရာ အချိန်မမီတော့။ ရွာသို့လာအကြောင်းကြားသူသည် စာရေးသူထံ အရင်လာသတင်းပို့ရာ စိုးရိမ်စိတ် ကြောင့် ဘာတစ်ခုမှ မမြင်မကြားရတော့ဘဲ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနရှိရာ နှစ်မိုင်ကျော်ခရီးကို တစ်ချိုးတည်း ပြေးခဲ့မိပါသည်။ ညီမငယ်ဖြစ်လင့်ကစား ဖခင်ဟူသော မေတ္တာစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် မောရမှန်း၊ ပန်းရမှန်းပင်မသိ။ ညီမလေး တစ်ခုခုများဖြစ်ခဲ့လျှင်ဆိုသည့်အတွေးသာ ခေါင်းထဲပြည့်နေပြီး မျက်ရည်တို့သည် ဖြိုင်စွာကျနေသည်။ ဆေးခန်းသို့ ရောက်ပါသော်လည်း ညီမလေး၏ အသက်အား ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ မရဏမင်းထံ ဆက်သွင်းခဲ့ရပါသည်။ မိခင်နှင့်ဖခင်အပါအဝင် မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်း အားလုံးပူဆွေးသောကဖြစ် ကြရသည်။
စိတ်ကို မဖြေလျှော့နိုင်သောကြောင့် ခဏတိုင်း မေ့လဲသော အဖေ၊ ငါ့ကြောင့် ငါ့သမီး သေရတာဟု ပြောကာ သတိမေ့တတ်သောအမေ၊ ပူဆွေးသောက ကြောင့် ပစ္စည်းပစ္စယများ ကျနေတတ်သော ညီမများအား စာရေးသူထိန်းကျောင်းကာ ညီမ၏ရုပ်အလောင်းအား ရွာသို့ပြန်သယ်ရန်စီမံခဲ့ရပါသည်။ သို့သော် ရပ်ရွာဓလေ့သည် ရင်နာစရာကောင်းခဲ့လေသည်။ ရပ်ရွာအတွင်း သေဆုံးခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် ရွာအတွင်းအသွင်းမခံ။ ပူဆွေးကာ အိမ်ပြန်ရန် ဖျောင်းဖျမရသော မိဘနှစ်ပါးကြောင့် စာရေးသူ စီမံရသည်။ နေ့ချင်းသင်္ဂြိုဟ်လိုက်ပါမှ အမိ၊ အဖတို့ အိမ်ပြန်ခေါ်၍ ရတော့သည်။ ထိုအချိန်က စာရေးသူသည် အသက် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီး အိမ်ထောင်မကျသေးပါ။ မိဘနှင့်ညီမများ၏အရေးအား အလေးထားဆောင်ရွက်ရခြင်း ကြောင့် မိမိတွင်ရှိသော နှလုံးရောဂါကိုပင် မေ့နေခဲ့ဖူးပါသည်။ စိတ်ဓာတ်သာ မမာခဲ့လျှင် ထိုနေ့ကပင် သေသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ အစ်ကိုကြီး၊ အစ်မကြီးများသည် အရေးကြုံပါက အမိနှင့် အဖသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု ပိုမိုလက်ခံမိပြီး လောကသည် အစ်ကိုအစ်မများအား မိဘများအစား သဘာဝကဖန်ဆင်းထားသူများ ဖြစ်ပေမည်ဟုလည်း ခံစားနားလည်ခဲ့ ရပါသည်။ ။
မြဝတီမြို့၌ တောင်းခံသည့် ငွေမပေးပါက မိုင်းဗုံးများ ဖောက်ခွဲပစ်မည်ဟု စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိ?
ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်မှစ၍ အချို့ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြိ?
ထိုင်းနှစ်ကုန်ဈေးရောင်းပွဲတော်များတွင် ကုန်သည်များအခွန်ရှောင်၍ အစိုးရအခွန်ငွေများဆုံး?